Izindaba - Ungazikhetha kanjani izinto ezisetshenziswa ku-PCR laboratory (2)
Ungazikhetha kanjani izinto ezisetshenziswa ku-PCR laboratory (2)
How ukukhetha izinto ezisetshenziswa ku-PCR laboratory (2)
Ukusabalala kobhadane olusha lomqhele kwezinye izindawo sekuyinto ekhathaza wonke umuntu. Ukutholakala kwe-coronavirus entsha njengamanje kusebenzisa kakhulu indlela ye-PCR ye-fluorescent, futhi isikhathi sokuphothulwa kombiko wokuhlolwa kwe-nucleic acid kuthatha cishe amahora ama-4 kuye kwayi-5. I-viric nucleic acid ingasetshenziselwa ukutholwa kuphela ngemuva kokukhishwa. Ngaphambi kokwenza ukuhlolwa kwensimbi, kuyadingeka ukuthi uqhubeke nomsebenzi wokwakhiwa kohlelo ngaphambi kokuhlolwa kwe-PCR emshinini, bese udlulisela emshinini we-PCR ukuqala ukuhlolwa kwe-PCR.
Kuyo yonke inqubo, ukufaka uketshezi ku-PCR kubonakala kungumsebenzi olula, kepha esigabeni samanje lapho inani lokutholwa likhuphuka kakhulu, empeleni liyisixhumanisi esisebenza kakhulu. Abasebenzisi bamapayipi ngokuvamile banokubheka okuningi lapho bekhetha ipayipi lokulinganisa, kepha lapho bekhetha ithiphu yokulinganisa ipipette, abanikeli’ngiyinake ngokwanele. Ithiphu yokulinganisa ipipette yokulinganisa ifana nenhlamvu yesibhamu sokulinganisa ipipette, esinomthelela omkhulu ekunembeni kokufakwa kwepayipi, ngakho ukubaluleka akulahleki. ukulinganisa isibhamu sepipette sokulinganisa. Mncanyana, buza inyuvesi, ake sifunde ndawonye.
1 Yiluphi ulwazi esidinga ukulwazi ukuthenga ithiphu?
“Uma nje ithiphu ingafakwa yithiphu engasetshenziswa” -lokhu cishe yikho konke ukuqonda okuvamile kwabasebenzisi kokuzivumelanisa nezimo kwethiphu. Lesi sitatimende kungathiwa siyiqiniso ngokwengxenye kodwa hhayi ngokuphelele.
Ithiphu engabekwa kupayipi lokulinganisa elingalingana lingakha uhlelo lokushaya amapayipi ngepayipi lokulinganisa ukuze kubonwe umsebenzi wepayipi, kepha ingabe lokhu kunokwethenjelwa? Uphawu lombuzo luyadingeka lapha. Ukuphendula lo mbuzo kudinga idatha yokukhuluma.
(1) Ungafisa ukwenza isivivinyo sokusebenza ngemuva kokufanisa ipayipi lokulinganisa elilinganiselwe nethiphu. Ngemuva kokuhlanza ithiphu, yenza imisebenzi yokuphindaphinda eyisampula ephindaphindwayo, ulinganise inani lesampula lokungezwa isikhathi ngasinye, bese urekhoda ukufundwa.
(2) Bala ukunemba nokunemba kokusebenza kwepipetting ngemuva kokukuguqula kube ivolumu ngokuya ngobuningi bolwelwesi lokuhlola.
(3) Esifanele ukukukhetha ithiphu ngokunemba okuhle nokunemba. Uma ipayipi lokulinganisa nelipayipi lokulinganisa lifaniswa nokunganemba kahle, kusho ukuthi ukuqina kwephayiphi lokulinganisa kanye nepayipi lokulinganisa akunakuqinisekiswa, ukuze imiphumela yokusebenza ngakunye ingakwazi ukwenziwa kabusha.
2 Yiluphi ulwazi esidinga ukulwazi ukuthenga ithiphu?
Izinkomba zokusebenza kwethiphu yilezi: ukukhangisa okuphansi, isici sokuhlunga, ukuqina, amandla okulayisha nokukhipha, akukho i-DNase ne-RNase, ayikho i-pyrogen; Lezi zinkomba zingatholakala kulwazi olulandelayo.
Ikhwalithi yezinto ezibonakalayo ze-01 Njengamanje, amathiphu okudonsa emakethe enziwe nge-polypropylene plastic (ipulasitiki engenambala futhi esobala enokungena kwamakhemikhali okuphezulu nobubanzi obubanzi bokushisa). Amathiphu ekhwalithi ephezulu ngokuvamile enziwe nge-polypropylene yemvelo, kuyilapho amathiphu ashibhile kungenzeka ukuthi asebenzise ipulasitiki ye-polypropylene esetshenzisiwe kabusha. Ithiphu enikezwe nguHuida yenziwe ngezinto ze-polypropylene ezingenisiwe ezihlangabezana namazinga we-USP Class-VI. Inokubonakala okuphezulu, ukumelana namakhemikhali awuketshezi anhlobonhlobo, kanye nobubanzi obuningi bokumelana namazinga okushisa: -80℃~ 121℃, akukho ukusonteka ngemuva kokushisa okuphezulu nokucindezela okuphezulu, izinto ezisezingeni eliphakeme zokusetshenziswa ziletha ukusebenza okuphezulu!
Ngaphezu kwalokho, iningi lamathiphu lizongeza inani elincane lezithasiselo ngesikhathi senqubo yokukhiqiza. Okuvamile yilawa:
(1) izinto ezithuthukisa umbala, ezisetshenziselwa izeluleko eziluhlaza okwesibhakabhaka nokuphuzi;
(2) izithasiselo. Siza ichopho ukuthi lihlukaniswe nesikhunta ngokushesha ngemuva kokwenza.
(3) Izithasiselo zokwelapha ingaphezulu lethiphu yesibhamu esine-adsorption ephansi.
02 Ukungcola kwezinto eziphilayo
Abasebenzisi abaningi bazodinga ukuthi amathiphu angabi ne-RNase, i-DNase-free, i-DNA-free, i-pyrogen-free ne-ATP-free. Kodwa-ke, amathiphu enzalo yokushisa okuphezulu awakwazi ukuqinisekisa ngokuphelele ukungabikho kokungcola kwezinto eziphilayo. Ukuqinisekisa ukuthi akukho kungcoliswa kwezinto eziphilayo, kudingeka izinyathelo ezifana nokwelashwa kwe-gamma ray. Ngakho-ke, cishe akunakwenzeka ukuthi abasebenzisi balahle amathiphu ajwayelekile abe ngamathiphu angcolisiwe ngokwebhayoloji, futhi amathiphu ebhokisi athengiwe angangcolisi ukopha kufanele anikeze izitifiketi ezihambisanayo ukukhombisa idatha yokuhlolwa kwezinto ezihambisanayo. Amathiphu ahlinzekwa nguDoheng wonke akhiqizwa kumhlangano wokufundela ongenaluthuli owesigaba esingu-100,000 ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo ayinayo i-pyrogen, i-DNase-free, ne-RNase.
Isigaba se-03Tips nokucaciswa
Ngaphezu kwamathiphu ajwayelekile asetshenziswa kakhulu, kukhona namathiphu wokuhlunga, amathiphu we-adsorption ephansi, amathiphu okusebenza okuzenzakalelayo, namathiphu omlomo obanzi, afanele ukuhlolwa okuhlukile. Isibonelo, isampula lokulinganisa isilinganiso elifakwe ipipi ngesihlungi ngeke likwazi ukungena ngaphakathi kwepayipi lokulinganisa, ngaleyo ndlela livikele izingxenye zepayipi lokulinganisa ekungcoleni nasekugqoleni. Okubaluleke nakakhulu, ingaphinde iqinisekise ukuthi ngeke kube khona ukungcoliswa okuphambene phakathi kwamasampuli.
Imininingwane yokupakisha yethiphu ikakhulu isezikhwameni nasemabhokisini. Ibhokisi lenziwe inzalo ngaphambi kokushiya ifektri, futhi umsebenzisi angalisebenzisa ngqo; kunamathiphu angama-500 noma ayi-1000 agxotshwe esikhwameni ngasinye, futhi abasebenzisi abaningi bazothenga amathiphu ahlanganisiwe bese befaka amathiphu ebhokisini lezeluleko. Ukupakisha okubhokisiwe kuyabiza, kepha ukufakwa kwesikhwama nakho kwandisa ubungozi bokungcola ngenkathi kulayishwa ngesandla ibhokisi lephepha.
I-Huida inebanga eliphelele lamathiphu, zombili ezikhwameni nasemabhokisini. Imininingwane yokudonsa: 10ul, 100ul, 200ul, 300ul, 1000ul, 1250ul; kukhona namathiphu ajwayelekile, amathiphu wokuhlunga, kanye namathiphu wokuziphatha afanele izikhungo zokusebenza. . Njengomhlinzeki okhokhelwe wemishini yezokwelapha nezinto ezisetshenziswayo, uHuida akakwazi ukunikeza amakhasimende kuphela izixazululo eziphelele zezinsimbi ze-PCR nemishini, futhi alwele okudliwayo kwelabhorethri ye-PCR, singanikeza uhla oluphelele lwemikhiqizo esezingeni eliphakeme nezinsizakalo ezihlobene. Siyakwamukela ukuthumela uphenyo ukuthola eminye imininingwane.